Command Center & Firefighter - Easy Multi Display - signage niomerika
Amin'ny maha-mpamono afo, mila manara-maso mivantana ny rindrambaiko maoderina eo amin'ny videowall anao ianao
Meteza ho isan'ireo mpisava lalana amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko Windows 10 Video Wall, alaivo avy hatrany amin'ny rindrambaiko matihanina, alao ny horonantsary mivantana drone ary maro hafa
Ny fitantanana ny krizy dia sarotra, tsy azo vinavinaina ary miteraka tarehin-javatra avo lenta. Mitovy amin'ny mpamono afo mila fampahalalana haingana ianao ary miankina amin'ny fanomezan-toky fa ekipa mahalala sy miara-miasa. Sarotra ny fotoana ary mandany vola be ny lesoka. Ireo fanovana toe-javatra ireo dia làlana iray izay ivon'ireo antso vonjy taitra sy ny ekipan'izy ireo dia tokony hanombana isan'andro mba hahazoana antoka fa afaka manampy ireo tena marefo izy ireo.
Ampidino ny fandinihana anay (EN)
Ampidino ny fandinihana anay (FR)
Any Frantsa, "CTA-Codis", na "Salle du 18", no efi-komandy foibe izay itondrana ny antso vonjy maika ho an'ny tobin'ny mpamono afo. Ho an'ireo ekipa ireo, ny tolona amin'ny fitantanana antso miakatra 400 isan'andro, ny fitarihana ireo mpiasan'ny vonjy taitra maika sy ny fifandraisana amin'ny vaovao dia niteraka toe-javatra sarotra izay tsy nahatratra ireo mila azy haingana ny fampahalalana tena ilaina. Ivon-toeran'ny komandin'izy ireo mpamono afo matetika dia kivy sy tototry ny fanamorana ny serasera ity.
Eto no nanoloran'i Easy Multi-Display an vahaolana vaovao manampy amin'ny fanavaozana ny fizarana vaovao ao anatin'ireto efitrano fandidiana ireto. Natomboka tamin'ny alàlan'ny fametrahana teo aloha tao anatin'ny CTA-Codis, ity vahaolana hafa ity dia manome ny mpampiasa farany traikefa ambony sy tsy misy tohiny. Ny fananganana rindrina horonantsary tokana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ireo ivon-kaomandy ireo dia midika fa afaka mizara vaovao eo noho eo ny kapiteny ary misarika ny sain'ny ekipan'ny efitrano fanaraha-maso iray manontolo.
Miomàna hampiasa ireo fampiharana lamaody farany ...
Miorina eo alohan'ny efitrano fandidiana, misy horonantsary namboarina mampiseho ny efijery rehetra ilaina sy ilaina mba hanampiana amin'ny fampahafantarana ekipa; Geo Artemis, Cameras fiarovana, Body Cameras, Tatitra Vaovao mivantana, ary Fantsona ara-tsosialy. Ny fanaingoana sy ny fametrahana an'ity rindrina horonantsary ity dia midika fa azo zahana sy azo jerena amin'ny fotoana rehetra ny fampahalalana, manampy amin'ny fitantanana isan'andro sy ny toe-javatra misy krizy rehetra. Miaraka amin'ny kapitenin'ny fitantanana afaka manova avy hatrany ny fampisehoana na topy maso ny rindrina horonantsary, ny vahaolana EMD dia manome fahaiza-manao ho an'ny ekipa ary midika fa ny rafitra dia afaka mitombo sy manitsy ny filan'ny fotodrafitrasa.
Raiso an-tsoratra, mifampiresaha, ary diniho amin'ny fotoana tena izy. Ity fametrahana EMD vaovao ao anatin'ny CTA-Codis ity dia tsy vitan'ny hoe hanamora ny fitantanana ny toe-javatra ao amin'ny efitrano fandidiana fa hanome alalana ihany koa fitaovana fanombanana aorian'ny fitantanana tranga iray. Ny mpamono afo dia afaka manombana manokana ny rakitsary fakan-tsary sy sary an-tsaina ny lesoka na ny fahombiazan'ny fitantanana. Ity fiverenan'ny traikefa ity dia mamorona fianarana fanao tsara indrindra ho an'ny ekipa sy olona tsirairay. Ny fahafaha-mamindra ny rafitra EMD mora foana amin'ny tranokala ivelany na amin'ny toerana tsy mila fividianana rindrambaiko na efijery vaovao dia manamafy ny fahafaha-manao ho an'ny ekipa, miaraka amin'ny EMD lasa mpiara-miasa afovoany miaraka amin'ireo foibe CTA-Codis amin'ny fitantanana krizy.
Vahaolana azo ovaina, azo ifandraisana ary azo ovaina dia mpahay manokana EMD anay. Ny fitantanana ny krizy dia mitaky ny rafitra izay miasa miaraka amin'ny ekipanao fa tsy ny haitao sarotra izay tsy sariaka amin'ny mpampiasa. Ny fanamorana ny fahazoana miditra amin'ny alàlan'ny rafi-pifandraisana azo ovaina sy eo no ho eo dia midika hoe ampahafantarina ireo ivon-tobim-pibaikoana sy ny ekipany amin'ny toe-javatra rehetra ary afaka mandray fanapahan-kevitra bebe kokoa.
Na mikarakara orinasa kely na orinasa lehibe izahay dia manaisotra ny fihenjanana amin'ny fampisehoana haino aman-jery amin'ny fampisehoana marobe. Mifandraisa amin'ny ekipanay anio mba hiresaka vahaolana Easy Multi-Display ho anao sy ny ekipanao.
Mandefasa WhatsApp na e-mail amin'ny mpanorina anay guy@easy-multi-display.com hahazoana ny anaran'ilay SDIS ary hahazoana referansa vitsivitsy.
Ahenao ambany ny vidin'ny Video Wall
Fahitalavitra lehibe 80 santimetatra (2000 euro), PC filalaovana (1000 euro), EMD pro (899 euro). Vola mitentina 3899 Euros ny fahazoana endri-javatra tsara kokoa noho ny vahaolana an-tsekoly taloha izay aloa 30.000 euro. Izy io dia tarehimarika tena izy, azafady mba mifandraisa amiko mba hahazoana ny fanovozan-kevitry ny departemanta frantsay (SDIS).
Raketo an-tsoratra ny zava-nitranga ary mianara isaky ny fandidiana
EMD manolotra fampiasa firaketana. Araraoty ny lasa hanatsarana ny ekipanao.
Midira amin'ny fampiharana lamaody
Te hampiseho ny horonantsary drone eo noho eo ve ianao, ny cam web na ny App mivantana mivantana?
- Safidy fiteny: anglisy, frantsay, sinoa, espaniola mandroso ...